Ku xir Manifold khariidad furan - Geofumadas
Abriil, 2009 Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth
Muddo ka hor Waan la hadlay iyaga in Manifold uu ku xirmi karo Google, Yahoo iyo Virtual Earth. Hadda isku xiraha isku xirka Khariidadaha Furan (OSM) ayaa soo baxay, kaas oo ay jidka ku soo saareen C # oo ah isticmaale isticmaale loo yaqaan Jkelly.
Warka ayaa u muuqday todobaadkan Kulanka Manifold, halkaas oo labadaba .dll labadaba u oggolaanaya isku xirka iyo codka la soo dhejiyay si qofku u arki karo sida loo sameeyay iyo isku dayga in la abuuro qiiq kale.
Sidaa darteed, waa inaad download, hadda ee golaha Manifold, dll ee loo baahan yahay in lagu meeleeyo "faylasha barnaamijka / Manifold System /", kaliya meesha ay ku xiran yihiin xiriiriyayaasha kale.
Kadibna si aad u buuxiso lakabka waxaa lagu sameeyaa "File / image / link / link image manifold"
Tani waxay u oggolaaneysaa guddi aad ka dooran karto labada Yahoo Maps, Google iyo Virtual Earth. Hadda waa inaad awood u yeelatid inaad aragto lakabyada Virtual Earth sidoo kale:
Khariidadda wareegga Cloudemade
Dhamaadka waxaad leedahay lakab muuqaal ah oo isku xiran sida aan ku arki lahayn OSM, waxaadna sameyn kartaa zooms lagu keydin karo Cache haddii aan go'aansanno inaan sidaas yeelno markii aan xareynay lakabka. Waxay sidoo kale noqon kartaa xarig la'aan, taas oo na siin doonta ikhtiyaarka aan ku dooran karno cabbirka pixel-ka oo aan ku badbaadinno caymiska gudaha.
Si aad ugu aragto khariidad, u jiido kaliya muuqaalka (khariidada) nidaamkuna wuxuu ka digayaa inuusan ku jirin isla saadaasha, haddii aysan la mid ahayn OSM. Marka tabka hoose, ee lakabka OSM ee aan kudarnay bandhigga, waxaan si sax ah u gujineynaa oo dooranayna "isticmaalka saadaasha" waana intaas.
Waxay u muuqataa sida muuqaal wanaagsan oo ku saabsan mid ka mid ah macluumaadka ugu muhiimsan ee macluumaadka vector online, taas oo waxay yiraahdaan, wuxuu kaydiyaa in ka badan 364 milyan oo shey, oo ah shey shabakad ballaadhan oo iskaashiyo leh. Alaabada kale sida Khariidadda Caalamiga ah y Cadcorp waxay sameeyaan
Cusboonaysiin: Maktabad ayaa sidoo kale la soo dhejiyay si ay ugu xirmaan Google Earth Terrain.
Post Previous" Hore Su'aalo yaab leh oo ku saabsan teknolojiyada CAD / GIS
Post Next Mashruucyada Isku-dhafka leh ee AutoCAD 3DNext »
Hal Jawaab ah "Ku xir Manifold Khariidadda Wadada Furan"
Wanaagsan! Beddelka OS-ka… Si bilaa cillad ah ayuu u shaqeeyaa… Waa maxay shaqo fiican James K.